#Natiijada Doorashada Xildhibaanada Gollaha Wakiillada Ee Gobolka Sool Magacyada Mudanaayasha Iyo Codadka | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
#Natiijada Doorashada Xildhibaanada Gollaha Wakiillada Ee Gobolka Sool Magacyada Mudanaayasha Iyo Codadka
#Natiijada Laascaanood(ANN)-Natiijada Gollaha Wakiillada Somaliland ee Laascaanood ee lagu dhawaaqay, waxaana ka muuqata natiijada hordhac ah in laysku muquuniyay cod oo loolan adag uu saddexda Xisbi ee KULMIYE, WADDANI iyo UCID, ku dhexamay gobolka Sool.
Natiijada hordhaca ah ee ay shaaciyeen Guddida doorashooyinka Qaranka, ayaa lagu xaqiijiyay xildhibaannada ku soo baxay doorashada Golaha Wakiillada ee Gobolka Sool, taas oo gonolka Sool ka dhigaysa gobolkii u horreeyey ee natiijadiisa la shaaciyay.
Tirada xildhibaannada Gollaha Wakiillada guud ahaan Gobolka Sool laga doonayo in ay ka mid noqdaan 82 xubnood ee gollaha wakiilladu ka koobanyahay, ayaa noqonay 12 xildhibaan, waxayna natiijada hordhaca ah muujinay in xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye oo helay shan xildhibaan, xisbiga Waddani oo ku soo xiga codadka ayaa helay Afar xildhibaan halka xisbiga UCID helay saddex Xildhibaan.
Tirada Codadka ay kala heleen iyo sida ay xildhibaanada saddexda Xisbi u kala horeeyaan.
1- Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo helay codad gaadhaya 4,456.
2- Mukhtaar Ibraahim Caashi di Cilmi oo helay codad gaadhaya, 2,544.
3- Saleebaan Maxamed Faarax oo helay codad gaadhaya 2,486
4- Mustafe Axmed Cabdilaahi oo helay, codad gaadhaya, 2,439
5- Axmed Xasan Cali Casoowe oo helay, codad gaadhaya, 2,269
1- Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo helay codad gaadhaya, 3,472.
2- Axmed Muuse Jaamac Diiriye oo helay, codad gaadhaya, 3,434.
3- Bile Cabdi Ducaale Samatar oo helay, codad gaadhaya, 2,340.
4- Qaasim Aadan Saleebaan Cali oo helay, codad gaadhaya, 1,922 .
1- Maxamuud Xayir Ducaale Diiriye oo helay,codad gaadhaya, 2, 986.
2- Abokor Faarax Warsame oo helay, codad gaadhaya , 2, 712.
3- Axmed Jaamac Saalax oo helay, codad gaadhaya 1,565 .
Murrashaxiinta Golaha Wakiillada ee Xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye, ayaa gobolka Sool ka helay codad gaadhaya, 26,842, halka murrashaxiinta Xisbiga Waddani ay ka heleen codad gaadhay, 19,292. murrashaxiinta Xisbiga UCID, ayaa wadarta codadkiisu kusoo ururen 16,946 cod.